Midabka Noocan oo kale ah ee horumarsan, Qolka Musqusha Runtii Hip!
Bogga ugu weyn / blog / Midabka Noocan oo kale ah ee horumarsan, Qolka Musqusha Runtii Hip!
2021 / 03 / 29 Qoondayntablog 3051 0
Naqshadeynta gudaha waxaa badanaa lagu taageeraa midabka si looga dhigo xiisad dheeri ah, laakiin marka la eego booska musqusha, nidaamka midabku waa mid aad u yar ama ka yar oo ilaalin ah, in kasta oo isticmaalka codka madow iyo caddaanku uu yahay mid caadi ah, laakiin waqti ka dib wuxuu sameeyaa muuqaal muuqaal ah saameyn, samaynta caajis
Sida meel musqusha oo gaar loo leeyahay, miyay leedahay midabkeeda? Jawaabtu waa haa. Arrintaan, aan ka hadalno mowduucan.
Orange, wakiilka dugsiga midabka dhalaalaya, waxay leedahay jawi deggan oo u gaar ah. Ama mugdi ama iftiin, ama dhalaal ama mugdi, midab kastaa wuxuu leeyahay macno u gaar ah oo macno leh, sida aan loogu oggolaan dadka inay sakhraansan yihiin.
Buluug + Liin dhanaan
Buluug, xasilloon oo qoto dheer, ayaa ku habboon buuxinta booska baaxad weyn; oranji waa mid dhalaalaya oo qayaxan, qurxin yar ayaa keeni karta jawi aan caadi ahayn oo tamar leh; markay labadoodu kulmaan, waxay abuurtaa meel farxad leh oo aan ujeedo lahayn.
Codsiga, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato isku-darka buluug-liin hooseeya iyo midab liin dhanaan ah, taas oo aan si aad ah u soo jiidasho lahayn laakiin aan aad u dhalaalayn. Saamiga qaybta, buluugga oo ah codka ugu muhiimsan, oranji ahaan midabka lahjadda, sidaas darteed gudaha iyo dibaddaba iswaafajinta.
Doog cagaaran + liin macaan
Meesha musqusha ee midabka madow iyo caddaanka ah, ee doogga cagaaran + xarkaha midabka joomatari midab leh ee midabku u buuxiyo midabka, wuxuu musqusha ka dhigi karaa mid dhalaala oo jilicsan Isku-darka midabka fudud iyo tartiib-tartiibka ah, tarjumaadda qaabka ugu dambeeya ee dabeecadda jilicsan.
Midab casaan ah
Sida wakiilka aragtida jacaylka, buuxinta midabka casaanka ah had iyo jeer waxaa ka buuxa lama filaan. Midab khafiif ah iyo mid fudud, oo xarrago iyo jaceylba leh, oo aan waxba galabsan oo gabar u eg, u dooro inay tahay midabka ugu weyn ee qolka musqusha, waa wax xigmad leh in la sameeyo.
Casaan + cadaan
Codad diirran oo casaan khafiif ah + cadaan ah si loo abuuro booska musqusha, guud ahaan codka waa jilicsan yahay, oo ay ka buuxdo jawiga dhalinyarada iyo dareenka diirimaadka. Tiles casaan qafiif ah oo dhalaalaya oo leh darbiyo cad oo saafi ah sida ku-meel-gaadhka, midab dabacsan oo leh xaalad maskaxeed deggan, dadka siinaya awoodda diirimaadka.
Casaan qaawan + cagaar madow
Isku dhaca midabka ee casaanka qaawan + cagaar mugdi ah ayaa lagu dhigey isugeyn seddex ilaa labo ah, oo keenaya jawi guryo qurux badan. Seddex meelood laba meel salka cagaaran ee mugdiga ah, iyadoo lagu darayo seddex meelood meel isku darka casaanka qaawan, kala duwanaanta midabka xoogan waxay soo saartaa xiisad muuqaal oo aad u fiican, sameynta dhamaan musqusha oo dhan waa farshaxan.
Pink + madow
Madow iyo casaan midba midka kale, in kasta oo aanu sida saafi ah oo dhalaalaya u muuqan sida dhinaca cad, laakiin inbadan oo ka mid ah luuqad midab gaar ah leh. Labada midab waxay ku xiran yihiin waxyaabo kala duwan oo ka sarreeya dusha sare, iskudhafid isku dhafan oo ka hooseeya wada noolaanshaha lama filaanka ah. Qol midabkiisu casaan yahay, oo ka yar jilicsanaanta asalka ah, in badan oo qulqulaya oo xaddidan oo xarrago leh, kaas oo kaliya ku dhaca shilka madow si loo soo saaro soo jiidashada midabka.
Pink + cirro
Tani waa midab isku dhafan oo midab leh, sare, xarrago leh, jaceyl ah, oo ah soo jiidashada muuqaalka ah ee ay soo bandhigayaan. Hadday is qurxiyaan, ama siman yihiin, waxay leeyihiin soo jiidasho midab leh oo aan la dhayalsan karin.
Nidaamka midabka cagaaran
Cagaar, midabka ugu muhiimsan ee palette, ha ahaato adeegsiga aag ballaaran ama qurxinta deegaanka, had iyo jeer iyaga oo soo jiidashada leh si ay u soo saaraan saameyn muuqaal oo iskeed ah, dadka ha ku jeclaadaan aragtida koowaad.
Cagaar + midab alwaax ah
Midabka cagaaran waxaa loo isticmaalaa inuu yahay codka ugu muhiimsan ee lagu faafiyo dhamaan meelaha, oo keenaya jawiga dabiiciga ah, iyo saxanka midabka midabka leh waxaa loo isticmaalaa inuu yahay lahjad si uu u sii xoojiyo dhadhanka guud. Soo bandhigida midab ruuqa ah iyo mid dabiici ah ayaa siinaysa goobta oo dhan qurux dabiici ah oo aan la sheegi karin.
Cagaar + Cadaan
Kulanka cagaaran iyo caddaan wuxuu leeyahay walaaq farxad leh oo umuuqda inuu toosinayo xaalada nadiifka ah ee maskaxda wadnaha. Ciyaarta u dhaxeysa labadooda, oo aan dan ka lahayn saamiga, ama qurxinta, ama laba iyo badh, ayaa leh muujinta ugu dambaysa ee jilicsanaanta, raaxaysiga iyo soo jiidashada leh.
Cagaar + Madow
Meelkan weyn ee cagaaran, madow wuxuu noqday midabka lahjadda midba midka kale u dhexeeya. Fure-hoose iyo is-dhexgal iyada oo aan lumin xaragada, halabuurka hordhaca iswaafajinta, sidaa darteed booska oo dhan waxaa ka buuxa dareen aan dhammaad lahayn oo heer sare ah.
Midabka cas ee kulul, badanaa badanaa, wuxuu umuuqdaa midab lahjad ah, laakiin macnaheedu maaha inuusan noqon karin midabka ugu weyn. Iyadoo aan loo eegin saamiga, waxay wali leedahay aragti muuqaal muuqaal leh.
Casaan + Grey
Casaanka lebenka culus wuu ka duwan yahay midabada kale ee mugdiga ah, cod diiran oo dhexdhexaad ah oo ku siin kara booska oo dhan dareen dib u noqosho leh waqti isku mid ah, oo leh isla cawl heer sare ah oo qoto dheer, oo abuuraya dareen qoto dheer oo soo jiidasho leh oo heer sare ah.
Casaan + cad
Waxaa ka mid ah casaanka ku fadhiya aag ballaaran, oo lagu daro caddaan, oo muujineysa dareenka jilicsan ee quruxda badan. Laga soo bilaabo casaanka illaa kala-guurka midabka cad, waxaa laga soo qaatay quruxda firfircoon ee wehliyaha.
Ka dib markaad aqriso qorshayaasha midabadan, miyaa la ogaaday in meesha musqusha ee asalka ahi ay sidoo kale noqon karto "midab"? Xaqiiqdii, marka la barbardhigo cufnaanta madow iyo caddaan, isticmaalka midabyo badan oo loogu talagalay booska musqusha waxaa lagu dhisay dareen raaxo leh oo aragti ah. Muuji oo ha lumin waayeelka, si dadku ugu farxaan.
Hore:: 2021 Midabka Musqusha oo leh, Nabad ku dheh bilicsanaanta "Caadiga ah", Gurigaaga “Midab” ha u soo baxo Next: Kani waa Musqusha, Ka gurigaaga ku yaalo waa Musqul keliya - Isbeddellada cusub ee Naqshadaynta Musqusha 2021